Andoni Bastarrika iyo farshaxankiisa cajiibka ah ee ciidda | Hal-abuurka Online
In badan oo naga mid ah ma arki doono xeebta sanadkan sababo la xiriira xannibaadda, laakiin waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelato inaad ku noolaato meel u dhow fanaankan Basque oo abuuray qaar ka mid ah. farshaxan ciid cajiib ah, iyo in meel fog laga helo waa hubaal inaad ku qaldami karto xayawaan dhab ah.
Andoni Bastarrika wuxuu inooga tagay si ka sii yaab badan farshaxannadaas ciidda kuwaas oo dhab ah. Waxay ku dhowdahay inay noqoto sida ugu wanaagsan ee lagu xasuusan karo xeebta nagu soo raacday fasaxyadayada iyo halka markii aan booqanayno meelaha bannaanka ah aan kula kulmi jirnay farshaxanno u isticmaala ciidda sida qalabkooda shaqo.
Way cadahay in Bastarrika wuxuu ka guuraa tayada iyo tayada qaar ka mid ah kuwaas oo aynu ka arki karno samaynta farshaxanada; weliba si ka sii daran marka annagu nafteenna aan bilowno dhismaha qalcaddii ciidda.
Un Waxaan u shaqeeyaa hami badan sida aad ku arki karto sawirada in nala socda oo muujinaya in ciidda, si fiican loo shaqeeyay, ay noqon karto maaddo lagu xisaabtamo marka aan rabno inaan raadinno qaabab cusub oo muujin ah; ama ugu yaraan agab.
Ciyaarta Bastarrika oo leh faahfaahin aad u xiiso badan sida ay yihiin textures kuwaas oo muujinaya cilladaha maqaarka Xoolaha uu gacmihiisa ku xardho. Waxa laga yaabaa inay calaamad u tahay inay ka soocdo kuwa kale iyo sida maqaarka wiyisha laftiisu u muuqdo dildilaac si loo siiyo heerka dhabta ah ee weyn.
Waa kuwa xayawaanka hormoodka u ah farshaxankiisa ciidda iyo in aad kala socon karto Facebook-giisa e Instagram. Miisaanka, ku ciyaar heerar kala duwan oo qoyaan ah si aad awood ugu yeelatid inaad kor u qaaddo teendhada octopus ama sida maqaarka dibigu u muuqdo labiska. Shaqo aad u fiican in la raaco iyo in laga bilaabo khadadkan Creativos waxaan ku talinaynaa.
Waa maxay Waxay naga tagtaa xiisaha waa xeebaha meesha lagu arki karo; Waxay ka nabad qabaan waqooyiga iyo sidoo kale Waddanka Basque. Ma aha mid ka mid ah kuwa ugu horreeya kuwaas oo nagu soo booqda khadadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Bastarrika sawirada cajiibka ah ee ciidda oo umuuqda xayawaan dhab ah
Sawirka ugu horreeya iyo waxaan u maleynayaa kuwan soo socda sidoo kale, laakiin sawirka ugu horreeya ayaa shaki la'aan ah xeebta Zarautz, oo ka jawaabaya faallooyinkaaga ugu dambeeya.